Ufuna kugezwe igama oboshelwe ukudlwengula ingane (4) | News24
Ufuna kugezwe igama oboshelwe ukudlwengula ingane (4)
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Enye yezimoto zikaMnu Zwe Sithole ophika ukudlwengula umntwana emva kokuba icala lakhe lihoxiswe yinkantolo kaMantshi eMgungundlovu ngenxa yokuweleka kobufakazi. Manje uthi ufuna kugezeke igama lakhe.
UTHI ufuna isinxephezelo owesilisa waseMbali Unit BB othi ubhecwe ngobende inyama engayidlanga ecaleni lokudlwengulwa elenzeka ngenyanga uNhlangulana.
Lona wesilisa owaziwa endaweni ngegama likaZwe Sithole ophinde abe “ngumalume” othutha izingane zesikole uthi kumanje usele engenalutho emva kokubhadla ejele ngecala lokudlwengula umntwana wentombazane oneminyaka emine ubudala (4).
Ngokwakhe uthi namanje usadidekile ukuthi kungani umama womntwana ambheca ngaleli cala.
Utshel i-Echo ukuthi naye usadidekile kodwa wakubeka ngokusobala ukuthi ufuna incazelo futhi ufuna ukuthi igama lakhe ligezwe emphakathini njengoba aziwa njengomuntu onesandla ekubhekeleleni ukuphepha komphakathi.
“Kumanje ngisele anginalutho ngenxa yaleli cala lokudlwengula omunye wabantwana engangibathutha ngemoto yami ukubayisa esikoleni. Ngeke ngazi ukuthi bathi kwenzeke kanjani kodwa ngabona ngamaphoyisa esezongigaxa ozankosi, ethi ngibhekene necala lokudlwengula ziwu-12 kuNhlangulana. Ayikho incazelo engayithola kangangoba ngafika esiteshini samaphoyisa i-Plessieslaer ngisadidekile ukuthi ngabe yini eyenzekayo. Ngabhadla esitokisini kusukela ziwu-12, kwathi zingu-15, ngavela enkantolo ngacela ibheyili kodwa inkantolo yala yaphetha ukunginikeza. Lokho kwacacisa ukuthi ngibuyela ngaphakathi esitokisini. Zingu-24 ngabuyela futhi enkantolo yaphinda futhi inkantolo yenqaba ukunginikeza ibheyili. Kuze kwathi zingu-31 kuNcwaba ngakwazi ukuthi ngidedelwe ngiphume nalpho leli cala lisuliwe.,” kusho uSithole.
Uqhube wathi ukusulwa kwecala kungenxa yokuthi inkantolo ingazange ibuthole bonke ubufakazi obufana nohlolofuzo lwegazi okuyilona oluzochaza ukuthi ngabe ngiyathinteka yini ekudlwengulweni kwengane.
“Njengomuntu ozisebenzayo ngilimele kakhulu, ikakhulukazi kulo msebenzi wami wokuthutha abantwana. Ngaphambi kwaleli cala bengithatha abantwana ngezimoto zami ezine (4). Abantwana bengibahambisa ezikoleni eziningi zelokishi iMbali. Konke lokho kushabalele ngoba izimoto zami zafa ngesikhathi ngisejele, enye yazo yantshontshwa. Kumanje yinye vo imoto esebenzayo kanti lokho kungilimaze kakhulu. Ngizamile ukuxhumana nommeli lapho ngifuna khona ukuthi kwenzeke ubulungiswa ngaleli cala. Inkulu imali ayidingayo ummeli ukuze aqhubeke kodwa anginayo ngoba umsebenzi wami ufana nophelile ngesikhathi ngingekho,” usho kanje.
Elinye lamaphephandaba laveza ukuthi uSithole wathatha ingane wahamba nayo, wayithatha wayivalela endlini wayidlwengula qede wayihambisa esikoleni. Liveze ukuthi kwaba uthisha wesikole owabona ukuthi ingane ayikho esimeni esigculisayo nowabe eseshayela umama womntwana ucingo emazisa ngesimo ayesibona kumntwana.
Umama womntwana wamyisa kadokotela nowafike wakuqinisekisa ukuthi umntwana udlwenguliwe, kuqhuba iphephandaba.
USithole uyakuphika konke lokhu uthi kungamanga aluhlaza kanti ume njalo ekutheni igama lakhe ligezeke.
Umama wontwana uphikile ukuthi icala lihoxisiwe